Happy couple တွေ သူတို့ရဲ့ RS ခိုင်မြဲဖို့အတွက် ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့ လှို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ - Lifestyle Myanmar
Home Relationship Happy couple တွေ သူတို့ရဲ့ RS ခိုင်မြဲဖို့အတွက် ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့ လှို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ
Happy couple တွေ သူတို့ရဲ့ RS ခိုင်မြဲဖို့အတွက် ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့ လှို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ
သင့်ရဲ့လက်ရှိ Rs က အရမ်းကိုပျော်ရွင်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါသလား? ပျော်ရွင်နေကြတဲ့ စုံတွဲတွေတိုင်း သူတို့တွေရဲ့ အဆင်မပြေတဲ့နေ့တွေမှာတောင်မှ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ကြတာ သင်ဘာကြောင့်လို့ထင်ပါသလဲ။ သူတို့ရဲ့ relationship နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လိုပျော်ရွင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာ သူတို့သိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် Happy Couple တွေပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အရာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
၁။ အချိန်တွေကို အတူတကွကုန်ဆုံးတတ်တယ်
Happy Couple တွေဟာ သူတို့အတွက် အချိန်တွေကို အမြဲတမ်းပဲ ရှာဖွေနေတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်လေးတွေမှာ တီဗွီထိုင်ကြည့်နေကြမဲ့အစား လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို အတူတကွဆောင်ရွက်တတ်ကြတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ဘဝမှာခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ နှောင်ကြိုးတွေဖြစ်စေတဲ့ ကလေးလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေ မရှိရင်တောင်မှ နှစ်ယောက်သားတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ကြပါတယ်။
Relationship တွေကျရှုံးရခြင်းရဲ့ အများဆုံးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုက communication ပျောက်ဆုံးရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို Happy couple တွေကောင်းကောင်းနားလည်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ လက်တွဲဖော်ရဲ့စကားကို ကြားဖြတ်ပြောခြင်း မရှိကြပဲ အသေအချာနားထောင်တတ်ကြပါတယ်။ နားထောင်ပြီးတာနဲ့ အတိုချုံးနားလည်ကြပြီး စာနာပေးတတ်ကြတယ်။ သူတို့တွေဟာအကြောင်းအရာတိုင်းတော့ သဘောမတူတတ်ကြပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် တသက်သားရဲ့အမြင်ကို လေးစားမှုရှိပြီး အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် communicate လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ရန်ဖြစ်ဖို့အစား အဖြေရှာဖို့ကိုသာ ရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။
ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးခြင်းဟာ relationship တစ်ခုကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ Happy Couple တွေကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ရိုးသားတတ်ကြပြီး နားထောင်လို့မကောင်းတဲ့ သတင်းစကားတွေ၊ အကြောင်းအရာတွေတောင်မှ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ရိုးသားစွာမျှဝေတတ်ကြပါတယ်။ ယုံကြည်မှုနဲ့ ရိုးသားမှုဟာ သူတို့ရဲ့ relationship အတွက် အရေးအပါဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း သူတို့သိကြပါတယ်။
၄။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သွန်သင်တတ်ကြတယ်
ဒီလိုစုံတွဲတွေဟာ သူတို့ရဲ့လက်တွဲဖော်ဆီကနေ အများကြီးလေ့လာလို့ ရတယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေ လိုအပ်ချက်တွေကို ဝန်ခံဖို့ဝန်မလေးတတ်ကြပဲ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကူညီဖို့ကြိုးစားတာကိုလည်း ခွင့်ပြုတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေအတူတူ တိုးတက်လာရင် သူတို့ရဲ့ Relationship လည်း ပိုမိုခိုင်မြဲလာမယ်ဆိုတာကို နားလည်တတ်ကြပါတယ်။
၅။ ပြဿနာတွေမှတဆင့် ပြောဆိုတတ်ကြတယ်
Happy couple တွေဟာပြဿနာတွေကို လျစ်လျူမရှုတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ပြဿနာတိုင်းကို မြန်နိုင်သမျှမြန်အောင် ရင်ဆိုင်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကို အဖြေပေါ်လာတဲ့ အချိန်ထိ သို့မဟုတ် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းလို့ ရမယ့်အချိန်ထိ ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။
၆။ အချစ်ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် အမြဲသတိပေးတတ်ကြတယ်
ဒီလိုစုံတွဲတွေဟာ လက်ချင်းကိုင်းထားတာ၊ နမ်းတာတွေနဲ့ ပွေ့ဖက်တာတွေကို ဘယ်တော့မှ ရပ်တန့်သွားမှာ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ဒီလိုကြင်နာမှုအရိပ်အယောင်တွေက Rs တိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ သတိပေးမှုတွေဆိုတာကို သူတို့သိကြပါတယ်။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သတိလစ်ပြီးမှားယွင်းမိ၊ နာကျင်စေတာတွေမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးရမယ်ဆိုတာ သူတို့သိကြပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေ ကြုံလာတိုင်း ယခုလိုကိစ္စကို ပြောဆိုကြပြီး ဒီအခိုက်အတန့်ကနေ ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို အတူတကွ ရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ အာဃာတတရားကို လက်ကိုင်ထားနေရင် ကွဲရဖို့သားရှိပါလိမ့်မယ်။
၈။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ရှုထောင့်ကို Focus ထားတတ်တယ်
ပြီးပြည့်စုံအောင်ကောင်းမွန်သူဆိုတာ မရှိပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူတိုင်း အပြစ်အနာအဆာများ ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုအပြစ်အနာအဆာလေးတွေကိုပဲ မြင်တတ်ရင်တော့ စိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့ မကောင်းတဲ့ရလာဒ်တွေကိုပဲ ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ ဒီလိုအပြစ်တွေချည်း မြင်မယ့်အစား happy couple တွေကတော့ ချစ်သူရဲ့အားသာချက်လေးတွေ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိတာလေးတွေကို မကြာခဏသတိပေးပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။
၉။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လေးစားကြတယ်
Relationship တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လေးစားခြင်းဟာ အခြေခံကျတဲ့ အုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သူတို့တွေ သိကြပါတယ်။ ဒီလိုလေးစားမှုကို ကိုယ်ကပေးမှသာ ကိုယ်ပြန်ရနိုင်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ လေးစားခံရဖို့ ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် relationship အတွင်းမှာတော့ လေးစားခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ ရင့်ကျက်ခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ ပျော်ရွင်ခြင်း အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ဆောင်နေပါတယ်။ ပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့ relationship အတွက် အဓိကသော့ချက်တစ်ခုပါ။
၁၀။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မကြခဏနမ်းတယ်
ပျော်ရွင်နေကြတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ သူတို့နိုးလာတဲ့အချိန်၊ အလုပ်မသွားခင်အချိန်၊ နဲ့အိပ်ရာမဝင်ခင်အချိန်တွေမှာ ချစ်သူကို နမ်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်လေးက relationship တစ်ခု ခိုင်မြဲဖို့၊ ပျော်ရွင်ရဖို့အတွက် သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူရဲ့ ငြင်းဆန်ခြင်းခံရတဲ့အခါ ဖြေရှင်းဖို့အတွက် နည်းလမ်း ၄ ချက်
Happy couple တှေ သူတို့ရဲ့ RS ခိုငျမွဲဖို့အတှကျ ထိနျးသိမျးတတျတဲ့ လှို့ဝှကျခကျြတှကေ ဘာတှလေဲ
သငျ့ရဲ့လကျရှိ Rs က အရမျးကိုပြျောရှငျစရာကောငျးတယျလို့ ထငျပါသလား? ပြျောရှငျနကွေတဲ့ စုံတှဲတှတေိုငျး သူတို့တှရေဲ့ အဆငျမပွတေဲ့နတှေ့မှောတောငျမှ တညျတညျငွိမျငွိမျလေးနဲ့ ဖွတျသနျးသှားနိုငျကွတာ သငျဘာကွောငျ့လို့ထငျပါသလဲ။ သူတို့ရဲ့ relationship နဲ့ပတျသတျပွီး ဘယျလိုပြျောရှငျအောငျ ဆောငျရှကျရမယျဆိုတာ သူတို့သိကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Happy Couple တှပွေုလုပျလရှေိ့တဲ့ အရာလေးတှကေို ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
၁။ အခြိနျတှကေို အတူတကှကုနျဆုံးတတျတယျ
Happy Couple တှဟော သူတို့အတှကျ အခြိနျတှကေို အမွဲတမျးပဲ ရှာဖှနေတေတျကွပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ တနျဖိုးရှိတဲ့ အခြိနျလေးတှမှော တီဗှီထိုငျကွညျ့နကွေမဲ့အစား လှုပျရှားမှုလေးတှကေို အတူတကှဆောငျရှကျတတျကွတယျ။ သူတို့တှရေဲ့ ဘဝမှာခကျခဲတဲ့အခြိနျတှကေို ဖွတျသနျးနိုငျဖို့ နှောငျကွိုးတှဖွေဈစတေဲ့ ကလေးလေးတှေ၊ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေးတှေ မရှိရငျတောငျမှ နှဈယောကျသားတဈယောကျကိုတဈယောကျ ဖွညျ့ဆညျးပေးတတျကွပါတယျ။
Relationship တှကေရြှုံးရခွငျးရဲ့ အမြားဆုံးအကွောငျးပွခကျြတဈခုက communication ပြောကျဆုံးရတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ဒါကို Happy couple တှကေောငျးကောငျးနားလညျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ လကျတှဲဖျောရဲ့စကားကို ကွားဖွတျပွောခွငျး မရှိကွပဲ အသအေခြာနားထောငျတတျကွပါတယျ။ နားထောငျပွီးတာနဲ့ အတိုခြုံးနားလညျကွပွီး စာနာပေးတတျကွတယျ။ သူတို့တှဟောအကွောငျးအရာတိုငျးတော့ သဘောမတူတတျကွပါဘူး၊ ဒါပမေယျ့ တသကျသားရဲ့အမွငျကို လေးစားမှုရှိပွီး အခွားတဈယောကျရဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ထညျ့သှငျးစဉျးစားခွငျးဖွငျ့ တဈယောကျကိုတဈယောကျ communicate လုပျတတျကွပါတယျ။ ရနျဖွဈဖို့အစား အဖွရှောဖို့ကိုသာ ရှေးခယျြတတျကွပါတယျ။
ယုံကွညျမှုပြောကျဆုံးခွငျးဟာ relationship တဈခုကိုပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။ Happy Couple တှကေတော့ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ရိုးသားတတျကွပွီး နားထောငျလို့မကောငျးတဲ့ သတငျးစကားတှေ၊ အကွောငျးအရာတှတေောငျမှ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ရိုးသားစှာမြှဝတေတျကွပါတယျ။ ယုံကွညျမှုနဲ့ ရိုးသားမှုဟာ သူတို့ရဲ့ relationship အတှကျ အရေးအပါဆုံး အစိတျအပိုငျးဖွဈကွောငျး သူတို့သိကွပါတယျ။
၄။ တဈယောကျကိုတဈယောကျ သှနျသငျတတျကွတယျ
ဒီလိုစုံတှဲတှဟော သူတို့ရဲ့လကျတှဲဖျောဆီကနေ အမြားကွီးလလေ့ာလို့ ရတယျဆိုတာ သိကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ သူတို့ရဲ့အားနညျးခကျြတှေ လိုအပျခကျြတှကေို ဝနျခံဖို့ဝနျမလေးတတျကွပဲ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ကူညီဖို့ကွိုးစားတာကိုလညျး ခှငျ့ပွုတတျကွပါတယျ။ သူတို့တှအေတူတူ တိုးတကျလာရငျ သူတို့ရဲ့ Relationship လညျး ပိုမိုခိုငျမွဲလာမယျဆိုတာကို နားလညျတတျကွပါတယျ။
၅။ ပွဿနာတှမှေတဆငျ့ ပွောဆိုတတျကွတယျ
Happy couple တှဟောပွဿနာတှကေို လဈြလြူမရှုတတျကွပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ပွဿနာတိုငျးကို မွနျနိုငျသမြှမွနျအောငျ ရငျဆိုငျတတျကွပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ပွဿနာတှကေို အဖွပေျေါလာတဲ့ အခြိနျထိ သို့မဟုတျ စစေ့ပျညှိနှိုငျးလို့ ရမယျ့အခြိနျထိ ပွောဆိုတတျကွပါတယျ။
၆။ အခဈြကို သူတို့ကိုယျတိုငျ အမွဲသတိပေးတတျကွတယျ
ဒီလိုစုံတှဲတှဟော လကျခငျြးကိုငျးထားတာ၊ နမျးတာတှနေဲ့ ပှဖေ့ကျတာတှကေို ဘယျတော့မှ ရပျတနျ့သှားမှာ မဟုတျကွပါဘူး။ ဒီလိုကွငျနာမှုအရိပျအယောငျတှကေ Rs တိုငျးအတှကျ မရှိမဖွဈအရေးပါတဲ့ သတိပေးမှုတှဆေိုတာကို သူတို့သိကွပါတယျ။
တဈယောကျကိုတဈယောကျ သတိလဈပွီးမှားယှငျးမိ၊ နာကငျြစတောတှမှော တဈယောကျကိုတဈယောကျ ယုံကွညျစိတျခစြှာနဲ့ ခှငျ့လှတျပေးရမယျဆိုတာ သူတို့သိကွပါတယျ။ ဒီလိုပွဿနာတှေ ကွုံလာတိုငျး ယခုလိုကိစ်စကို ပွောဆိုကွပွီး ဒီအခိုကျအတနျ့ကနေ ကြျောဖွတျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးကို အတူတကှ ရှာဖှတေတျကွပါတယျ။ ဒီလိုမှမဟုတျပဲ အာဃာတတရားကို လကျကိုငျထားနရေငျ ကှဲရဖို့သားရှိပါလိမျ့မယျ။
၈။ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ ရှုထောငျ့ကို Focus ထားတတျတယျ
ပွီးပွညျ့စုံအောငျကောငျးမှနျသူဆိုတာ မရှိပဲ ကြှနျတျောတို့ဟာ လူတိုငျး အပွဈအနာအဆာမြား ရှိကွပါတယျ။ ဒီလိုအပွဈအနာအဆာလေးတှကေိုပဲ မွငျတတျရငျတော့ စိတျပကျြစရာတှနေဲ့ မကောငျးတဲ့ရလာဒျတှကေိုပဲ ကွုံတှရေ့မှာပါ။ ဒီလိုအပွဈတှခေညျြး မွငျမယျ့အစား happy couple တှကေတော့ ခဈြသူရဲ့အားသာခကျြလေးတှေ၊ ဆှဲဆောငျမှုရှိတာလေးတှကေို မကွာခဏသတိပေးပွောဆိုတတျကွပါတယျ။
၉။ တဈယောကျကိုတဈယောကျ လေးစားကွတယျ
Relationship တဈခုကိုတညျဆောကျဖို့အတှကျ တဈယောကျကိုတဈယောကျ လေးစားခွငျးဟာ အခွခေံကတြဲ့ အုတျမွဈတဈခုဖွဈကွောငျး သူတို့တှေ သိကွပါတယျ။ ဒီလိုလေးစားမှုကို ကိုယျကပေးမှသာ ကိုယျပွနျရနိုငျကွောငျးကောငျးကောငျးသိကွပါတယျ။ လူတိုငျးဟာ လေးစားခံရဖို့ ထိုကျတနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ relationship အတှငျးမှာတော့ လေးစားခွငျးရဲ့ အဓိပ်ပာယျဟာ ရငျ့ကကျြခွငျး၊ လှတျလပျခွငျးနဲ့ ပြျောရှငျခွငျး အဖွဈအဓိပ်ပာယျဆောငျနပေါတယျ။ ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ relationship အတှကျ အဓိကသော့ခကျြတဈခုပါ။
၁၀။ တဈယောကျကိုတဈယောကျ မကွခဏနမျးတယျ
ပြျောရှငျနကွေတဲ့ စုံတှဲတှဟော သူတို့နိုးလာတဲ့အခြိနျ၊ အလုပျမသှားခငျအခြိနျ၊ နဲ့အိပျရာမဝငျခငျအခြိနျတှမှော ခဈြသူကို နမျးတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုခဈြစရာကောငျးတဲ့ အမူအကငျြ့လေးက relationship တဈခု ခိုငျမွဲဖို့၊ ပြျောရှငျရဖို့အတှကျ သံသယဖွဈစရာမလိုပါဘူး။
Previous articleဆံကေသာ ပိုမိုသန်စွမ်းစေဖို့ သဘာဝနည်းလမ်း ၁၀ခု
Next articleအချိန်တိုအတွင်း နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့ ဂျိုသား